मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी बालिकाको गाँजाले बचायो ज्यान ! हेर्नुहोस – Digital Newspaper
मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी बालिकाको गाँजाले बचायो ज्यान ! हेर्नुहोस
October 16, 2017 October 16, 2017 nepsnews
एजेन्सी। निकै असाधारण रोगका कारण मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी अमेरिकाको एरिजोनाकी १२ वर्षकी एनालिस लुजानको ज्यान गाँजाले बचाएको छ ।
लुजान त्यतिबेला मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी थिइन् जब उनलाई निकै दुर्लभ एपिलेप्सी सिन्ड्रोम नामको रोग लागेको थियो । यो रोगका कारण दिमागले ठिकसँग काम गर्दैन र लगातार बेहोसी तथा झट्काका कारण व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ ।
१२ वर्षकी एनाजिस एक जिम्नास्टिक मिटमा थिइन् । यत्तिकैमा उनलाई उल्टी हुन थाल्यो र खुट्टाले काम गर्न छाडे । उनका आमाबाबुले उनलाई तत्काल अस्पताल लिएर गए । अस्पतालमा उनको मस्तिष्कलाई मर्नबाट बचाउनको लागि डाक्टरहरुले यसलाई अचेत गरिदिए ।
जाँचपछि डाक्टरहरुले बताए एनालिसलाई निकै विचित्र किसिमको रोग लागेको छ । डाक्टरले उनको उपचार सुरु गरे तर उनीमाथि कुनै औषधीले असर गरिरहेको थिएन ।
औषधीले असर नगरेपछि डाक्टर र एनालिसको परिवार दुवै चिन्तित थिए । यही बीचमा एनालिसकी आमाले एक किताबमा लेखिएको अनुसन्धानमा पढिन् गाँजाको तेलबाट बनेको औषधी क्यानाबिडियलबाट यो रोगको उपचार सम्भव छ ।
एनालिसकी आमाले यस बारेमा डाक्टरसँग कुरा गरेपछि अस्पतालको अनुमतिमा यो औषधी परीक्षण गरियो । आश्चर्यको कुरा एनालिस यो औषधीको ३ डोजले ठिक भइन् । यो केडिकल साइन्समा निकै ठूलो उपलब्धी थियो ।एजेन्सी।
← धेरै जसो २०० देखि ५०० सम्म दिन्थे, कसैले रातभरि सुतेर पनि पैसा दिंदैनथ्यो, यसरी म बेश्या बनेँ ..
नेपाली राजनीतिका सदावहार खेलाडी बिजयकुमार गच्छेदार पुनः काँग्रेसमा पुरा हेर्नुहोस →
भोजपुरमा प्रिन्सिपलसँगको अवैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि ! बच्चा मार्ने देखि यति सम्म…
August 21, 2017 nepsnews Comments Off on भोजपुरमा प्रिन्सिपलसँगको अवैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि ! बच्चा मार्ने देखि यति सम्म…
पैसा कमाएर धेरै पढ्ने धोको थियो, लास बनेर घर फर्किए…
August 21, 2017 nepsnews Comments Off on पैसा कमाएर धेरै पढ्ने धोको थियो, लास बनेर घर फर्किए…
भारतीय प्रहरीको दादा गिरि गड्डाचौकीमा लुट्यो, बिचल्ली भयो यी नेपाली युवकको
September 16, 2017 nepsnews Comments Off on भारतीय प्रहरीको दादा गिरि गड्डाचौकीमा लुट्यो, बिचल्ली भयो यी नेपाली युवकको